Helitaanka Daryeel - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Xarunta Caafimaadka Habdhaqanka > Helitaanka Daryeel
Caafimaadka habdhaqanka wanaagsan waa qeyb ka mid ah caafimaadkaaga ugu fiican oo dhan. Waa tan waxa aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u hesho daryeelka sida ugu fiican kuu taageeraya.
Wax badan ayaad u qabataa dadka kale. Iyo, mararka qaarkood taasi waxay dareemi kartaa wax badan, sidoo kale. Arag bixiyaha caafimaadka hab dhaqanka waxay noqon kartaa hab fiican oo lagu helo taageerada qof walba ubaahanyahay waqti ama wakhti kale.
Waa kuwan waxa aad u baahan tahay inaad ogaato haddii aad ka fekereyso inaad aragto bixiye caafimaad oo dabeecad leh:
Caafimaadkaaga habdhaqanka daryeelka ayaa daboolaya.
Ma heli doontid lacag-bixin lacag-bixin ah illaa aad ka aragtid bixiye aan la shaqeynin CHPW ama Ururkaaga Adeegyada Maamulka Hab-dhaqanka (BH-ASO). Waxaad xaq u leedahay inaad doorato bixiye aqoon u leh daryeelkaaga caafimaadka hab dhaqanka. CHPW waxay taageertaa noocyo badan oo kala duwan oo ah adeegyada caafimaadka hab dhaqanka si loo hubiyo in bixiyeyaashu ay u bixin karaan daryeelka ugu fiican ee baahiyahaaga. La hadal adeeg bixiyahaaga si aad u ogaato adeegga adiga kuugu habboon:
Daaweynta bukaan socodka bukaan socodka
Baadhitaanka caafimaadka maskaxda ama arrimaha isticmaalka maandooriyaha
Dawada sunta bukaan-jiifka ee khamriga iyo dhibaatooyinka isticmaalka mukhaadaraadka
Opiate adeegyada daaweynta beddelka
Adeegyada degaanka ee caafimaadka maskaxda iyo dhibaatooyinka isticmaalka mukhaadaraadka
Daawada khamriga, dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha ama arrimaha caafimaadka maskaxda
Isbitaal dhigida cudurada maskaxda ee caafimaad ahaan daruuriga ah
Maareynta daawada iyo kormeerka
Qofka iyo daaweynta qoyska
Adeegyada xasilinta dhibaatooyinka
Hindida Mareykanka ama Alaska Asalka Daryeelka Caafimaadka Qabiilka
Uma baahnid gudbin si aad u aragto caafimaadka dhaqanka bixiye.
Xubin ahaan Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW), uma baahnid gudbin si aad u aragto bixiyaha caafimaadka habdhaqanka. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad dooran karto bixiye kasta oo shabakad ku jira oo aad u maleyneyso inuu ku habboon yahay. Bixiyeyaasha daryeelka aasaasiga ah sidoo kale wey taageeri karaan caafimaadkaaga dabeecadeed. Xarumaha Caafimaadka Bulshada iyo qaar badan oo ka mid ah bixiyeyaashayada daryeelka aasaasiga ah waxay leeyihiin khabiiro ku takhasusay caafimaadka maskaxda iyo isticmaalka mukhaadaraadka ee rugta caafimaadka si ay gacan uga geystaan ​​taageerada baahiyahaaga caafimaadka dabeecadda iyo sidoo kale baahiyahaaga caafimaadka jirka.
Waxaan kaa caawin karnaa inaad jadwal u sameysato ballantaada.
Haddii aad dhibaato ku qabtid inaad soo gasho si aad u aragto bixiye sabab kasta ha noqotee, fadlan kala xiriir CHPW halkan 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711). Waxaan kaa caawin karnaa inaad hesho bixiye caafimaad hab dhaqan.
Waxaan sidoo kale bixin karnaa maaraynta kiisaska.
Maareeyayaasha kiisku waxay kaa caawin karaan inaad maareyso caafimaadkaaga habdhaqanka baahi.
Maareynta kiiska ayaa loo daboolay xubin kasta oo ka tirsan CHPW. Maamulayaasha kiiskeena ayaa kaa caawin kara inaad jadwal sameyso oo aad ilaaliso balamaha, maareynta daawada, iyo inbadan. Wax ka baro maareeyayaasha kiisaska.
Caawinaad waad heli kartaa hadda.
Haddii aadan diyaar u ahayn inaad hesho adeeg bixiye heegan ah, laakiin aad ogtahay inaad u baahan tahay caawimaad, taasi waa caadi. Khadadka gargaarka degdegga ah iyo talooyinka caafimaad waxaa la heli karaa 24 saacadood maalintii, toddobada maalmood ee usbuucii.
Qaabka Ka Hortagga
Dib u soo kabashada Washington
Xiriirinta Talooyinka Kalkaaliyaha: 1-866-418-2920
Liiska Ka Hortagga Is-dilka ee Qaranka: 1-800-273-8255
Khadka Caawinta ee Washington Recovery: 1-866-789-1511
Khadadka Caawinta Dhibaatooyinka Deegaanka
Khadadka taleefanada ayaa gebi ahaanba qarsoodi ah. Waad wici kartaa xitaa haddii aadan hubin in xaaladdaadu tahay xaalad degdeg ah, ama haddii aad ka walaacsan tahay qof aad jeceshahay.
Eeg khadadka dhibaatada
Khadka Caawinta Washington Dhageyso
Washington Listens waa barnaamij cusub oo lagu taageerayo qofkasta oo Washington ku nool oo la kulma culeys cudurka faafa ee COVID-19. Waxay ka kooban tahay la-hawlgalayaasha gobolka ee gobolka oo dhan oo ka shaqeeya kooxo khubaro taageero si ay uga caawiyaan dadka wax ka qabashada waqtigan aan la hubin ee adag. Wac 1-833-681-0211 bilaash ah 9 am ilaa 9 pm Isniinta ilaa Jimcaha, 9 am to 6 pm Sabtida iyo Axada, ama marin uga hel internetka.
More Faahfaahin ka aqri Dhegeysiga Washington
Ku Wareejinta Adeegyada Degdegga ah (WISe)
Wareejinta Adeegyada Intensive (WISe) waa adeeg iskaa wax u qabso ah oo qaata qaab kooxeed si loo daboolo baahiyaha carruurta iyo dhalinyarada. Waxay bixisaa adeegyo degdeg ah oo loogu talagalay caafimaadka maskaxda si ay kaaga caawiso adiga iyo qoyskaagaba sidii aad u gaari lahaydeen yoolalkaaga.
Baro wax badan oo ku saabsan adeegyada WISe ee qoyskaaga
Ma rabtaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan caafimaadka hab dhaqanka?
Baro wax badan oo ku saabsan xulashooyinka daaweynta ee maskaxdaada, shucuurtaada, iyo caafimaadkaaga habdhaqanka adigoo u maraya CHPW. U hel dhaqaale adiga iyo qoyskaaga, kana raadi ururo Washington dhexdeeda u dooda daryeelka caafimaadka hab dhaqanka wanaagsan.
Booqo boggayaga Su'aalaha Caafimaadka Habdhaqanka